Best Urolithin B ntụ ntụ （1139-83-9） Manufacturer & factory
Cofttek bụ onye nrụpụta ntụ ntụ Urolithin B kacha mma na China. Ụlọ ọrụ anyị nwere sistemụ njikwa mmepụta zuru oke (ISO9001 & ISO14001), yana ikike mmepụta kwa ọnwa nke 200kg.
aha: Urolithin B.
Chemical aha: 3-Hydroxy-6H-dibenzo [b, d] pyran-6-otu
Usoro Chemical: C13H8O3
Ọbara arọ: 212.2 g / mol
InChi Igodo: WXUQMTRHPNOXBV-UHFFFAOYSA-N
Koodu SMILES: O=C1C2=CC=CC=C2C3=CC=C(O)C=C3O1
ọrụ: Urolithin B nwere ike melite ọrụ mitochondrial na akwara.
Urolithin B nwere ike imeziwanye ike na ntachi obi n’oge ịka nká.
ngwa: Urolithin B bụ metabolite microbial metabolic nke ellagitannis ma gosipụta ikike mgbochi oxidant na pro-oxidant na-adabere na sistemụ na ọnọdụ. Urolithin B nwekwara ike igosipụta estrogenic na / ma ọ bụ ọrụ mgbochi estrogenic.
Solubility: Na mfe soluble na N, N-dimethylformamide na dimethylmethylene. Sulfone, nke nwere ntakịrị mmiri na methanol, ethanol, na acylate ethyl
Nchekwa Nche: Hygroscopic, -20 Celsius C Freezer, N'okpuru ọnọdụ ikuku
Ọnọdụ Mbupu: Ebubo n'okpuru okpomọkụ dị jụụ dị ka chemical na-adịghị ize ndụ. Ngwaahịa a zuru oke maka izu ole na ole n'oge njem nkịtị na oge ejiri mee ihe na Omenala.
Urolithin B. NMR ụdịdị dị iche iche
Okwu Mmalite na Urolithins
Urolithins bụ metabolites nke abụọ nke ellagic acid sitere na ellagitannins. N'ime mmadụ ellagitannins na-agbanwe site na gut microflora n'ime ellagic acid nke na-agbanwe ọzọ n'ime urolithins A, urolithin B, urolithin C na urolithin D na nnukwu eriri afọ.
Urolithin A (UA) bụ ihe kachasị emetụta metabolite nke ellagitannins. Agbanyeghị, urolithin A amaghi na ọ na-eme n'ụzọ nkịtị na usoro nri ọ bụla.
Urolithin B (UB) bu ihe omuma di uku nke emeputara n'ime ime site na mgbanwe nke ellagitannins. Urolithin B bu nke ikpeazu mgbe emechara urolithin ndi ozo. Urolithin B dị na mmamịrị dị ka urolithin B glucuronide.
Urolithin A 8-Methyl Ether bụ ngwaahịa dị n'etiti n'etiti njikọ nke Urolithin A. Ọ bụ nnukwu metabolite nke abụọ nke ellagitannin ma nwee antioxidant na mgbochi mkpali Njirimara.
Usoro nke urolithin A na B
Rol Urolithin A na - ebute mitophagy
Mitophagy bụ otu ụdị arụrụ aka nke na - enyere aka wepu mitochondrial mebiri emebi maka ọrụ ha kachasị mma. Autophagy na-ezo aka na usoro izugbe nke ihe cytoplasmic mebiri emebi ma na-ejikwa ya emegharị mgbe mitophagy bụ mbibi na nrụgharị nke mitochondria.
N'oge ịka nká, mbelata nke autophagy bụ otu akụkụ na-eduga n'ịbelata ọrụ mitochondrial. Ọzọkwa, nrụgide oxidative nwekwara ike iduga obere autophagy. Urolithin A nwere ikike iwepu mitochondria mebiri emebi site na nhọrọ autophagy.
Oxidative nrụgide na-eme mgbe enwere nghọtahie n'etiti radicals free na antioxidant dị na ahụ. Ihe ndi a n’emebi ihe n’emeghị nsogbu n’obi na-ejikọkarị ya na ọtụtụ ọrịa na-adịghị ala ala dịka ọrịa obi, ọrịa shuga na kansa.
Urolithins A na B na-egosipụta mmetụta antioxidant site na ikike ha iji belata radicals n'efu yana otu ọkwa oxygen intracellular reactive nke mkpụrụ ndụ (ROS) ma na-egbochi mkpụrụ ndụ peroxidation n'ụdị ụfọdụ.
Ọzọkwa, urolithins nwere ike igbochi ụfọdụ enzymes na-egbu egbu, gụnyere monoamine oxidase A na tyrosinase.
● Njirimara mgbochi
Mbufụt bụ usoro okike nke ahụ anyị na-alụ ọgụ megide ihe ọ bụla dara ada dị ka ọrịa, mmerụ ahụ, na ụmụ nje. Agbanyeghị, mbufụt na-adịghị ala ala nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ n'ihi na enwere nsogbu dị iche iche dịka ụkwara ume ọkụ, nsogbu obi, na kansa. Ọrịa na-adịghị ala ala nwere ike ime n'ihi nnukwu ọnya na-enweghị ọgwụgwọ, ọrịa ma ọ bụ ọbụna ihe na-akpata free na ahụ.
Urolithins A na B na-egosipụta ihe mgbochi mbufụt site na igbochi mmepụta nitric oxide. Ha na egbochi ọgwụ nitric oxide synthase (iNOS) inducible na mRNA nke na-ahụ maka mbufụt.
Effects Mmetụta nje na-alụso nje ọgụ
Besmụ nje gụnyere nje, fungi na nje na-ewere ọnọdụ na gburugburu ebe obibi yana n'ahụ mmadụ. Agbanyeghị, ụmụ nje ole na ole akpọrọ ọrịa nje nwere ike ibute ọrịa na-efe efe dị ka flu, ọrịa na ọrịa ịba.
Urolithin A na B nwere ike igosipụta mmeghachi omume antimicrobial site na igbochi sensor quorum. Orchọpụta Quorum bụ usoro nkwukọrịta nke nje na-enyere nje aka ịchọpụta na ịchịkwa usoro metụtara ọrịa dịka virulence na motility.
Hib Imechi glycation protein
Glycation na-ezo aka na njikọ nke shuga na-enweghị enzymatic. Ọ bụ akara biomarker na ọrịa shuga na nsogbu ndị ọzọ yana ịka nká.
Nnukwu protein protein bụ mmetụta nke abụọ nke hyperglycemia nwere ọrụ dị ukwuu na nsogbu metụtara ọrịa obi dịka ọrịa shuga na ọrịa Alzheimer.
Urolithin A na B nwere ihe ndị na-egbochi glycative nke nwere ọgwụ ndabere dabere na-akwụghị ụgwọ ọrụ antioxidant ha.
Urolithin B bara uru
Ihe mgbakwunye Urolithin B nwekwara ọtụtụ uru ahụike yana ọtụtụ n'ime ya yiri uru urolithin A.
(1) Mgbochi ọrịa kansa
Ngwongwo mgbochi nke urolithin B na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nwa akwukwo maka ịlụ ọgụ cancer. Researchersfọdụ ndị nyocha akọpụtala ike ha na fibroblasts, microphages na sel sel endothelial.
Nnyocha e mere egosiwo na UB na-egbochi ụdị ọrịa kansa dị iche iche dịka prostate, colon na cancer eriri afọ.
N'ime nyocha metụtara mkpụrụ ndụ cancer mmadụ, ellagitannins, ellagic acid na urolithins A na B ka enyocha maka ikike ha nwere ịlụ ọgụ cancer. Ha kọrọ na usoro ọgwụgwọ niile nwere ike igbochi uto nke mkpụrụ ndụ kansa. Ha gbochiri ịgbatị mkpụrụ ndụ kansa site na njide sel mkpụrụ ndụ na ọkwa dị iche iche yana site na itinye apoptosis.
(2) Nwere ike inye aka ịlụ ọgụ megide nrụgide oxidative
Urolithin B nwere ezigbo antioxidant Njirimara site na mbenata ikuku oxygen na-arụ ọrụ na lipid peroxidation na ụfọdụ cell ụdị. A na-ejikọta ọkwa dị elu nke ROS na ọtụtụ nsogbu dịka ọrịa Alzheimer.
N'ime ọmụmụ ya na mkpụrụ ndụ neuronal kpughere na nchekasị oxidative, a hụrụ urolithin B yana yana urolithin A chebe sel iji gbochie oxidation ya mere mụbara mkpụrụ ndụ.
(3) Urolithin B na ebe nchekwa
A kọwo Urolithin b iji meziwanye ikike mgbochi ọbara. Nke a na - eme ka ọgụgụ isi rụọ ọrụ.
Mmụta emere gosiri na urolithin B nwere ike bụrụ ihe nkwalite nchekwa site na imeziwanye ọrụ ọgụgụ isi.
(4) Na-egbochi iku ume
Ọnwụ anụ ahụ nwere ike ime n’ihi ọtụtụ ebumnuche dịka ọgba aghara, ịka nká na ụkọ protin n’ime nri. Ọtụtụ usoro iji kwụsị, ike ma ọ bụ gbochie mfu anụ ahụ gụnyere, mmega ahụ, ọgwụ na amino acid yana polyphenols nwere ike ịrụ ọrụ.
Enwere ike eke urolithins dị ka polyphenols ma rụọ ọrụ na igbochi mfu muscle site na-eme ka njikọta protein protein na-emekwa ka ọ daa n'iyi.
N'ime ọmụmụ ya na ụmụ oke, achọtara Urolithin B na-elekọta ihe karịrị oge iji mee ka mmepe akwara dịwanye elu ka a hụrụ ka uru ahụ na-abawanye.
(5) Urolithin B na-alụ ọgụ megide mbufụt
Urolithin B nwere ihe mgbochi mbufụt site na mbenata ihe nrịbama mbufụt.
N'ime ọmụmụ nke oke nwere ọrịa akwara na-akpata akwara, a hụrụ urolithin B iji belata mmerụ akụrụ. Ọ welie ọrụ gbasara akụrụ, morphology nke akụrụ yana belata akara mmerụ akwara. Nke a na-egosi na UB nwere ike igbochi mbufụt gbasara akụrụ.
(6) Uru uru nke urolithin A na B
Enweela mmetụta nke mmekọrịta synergistic na nchikota urolithin A na B na arụ ọrụ na ikike. Ọmụmụ ihe ahụ kwuru na enwere ike iji nchikota a gwọọ ma ọ bụ gbochie nsogbu metụtara mgbaka dịka nchekasị ma ọ bụ ọrịa Alzheimer.
Uru ndị ọzọ metụtara urolithins bụ;
Na-agwọ ọrịa metabolic
Urolithin A na nri nri B
A maghị Urolithins n'ụzọ nkịtị na isi nri ọ bụla. Ha bụ ngwaahịa nke mgbanwe nke ellagic acid nke a na - enweta site na ellagitannins. A na-agbanwe Ellagitannins ka ọ bụrụ acids ellagic site na gita microbiota ma a na-agbanyekwu ọkụ acid n'ime metabolites (urolithins) na nnukwu eriri afọ.
Ellagitannins na-apụtakarị na isi mmalite nri dị ka pọmigranet, mkpụrụ osisi gụnyere mkpụrụ osisi strawberries, raspberries, Cloudberries na blakberị, mkpụrụ osisi muscadine, almọnd, guavas, tii, na mkpụrụ ndị dị ka walnuts na chestnuts yana mmanya na-eme agadi maka ihe atụ mmanya na-acha ọbara ọbara na whiskey si nnukwu osisi.
Ya mere anyi nwere ike ikwubi urolithin A nri na urolithin B nri bu nri ellagitannin bara ọgaranya. Okwesiri ighota na ellagitannin bioavailability nwere oke oke ebe ihe omuma ya nke abuo (urolithins) di ngwa ngwa.
Urolithins excretion na mmepụta dịgasị iche n'etiti ndị mmadụ ebe ọ bụ na ntụgharị si ellagitannins na-adabere na microbiota na eriri afọ. Enwere nje bacteria a kapịrị ọnụ na ntụgharị a ma dịgasị iche n'etiti ndị mmadụ ebe ụfọdụ nwere microbiota kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ obere dị. Ebe nri dị iche iche dịkwa iche iche na ogo ellagitannins. N'ihi ya, uru bara uru nke ellagitannins dịgasị iche site n'otu onye gaa na nke ọzọ.
Urolithin A na B Mgbakwunye
Urolithin A mgbakwunye yana Urolithin B mgbakwunye na-achọta ngwa ngwa n'ahịa dị ka mgbakwunye mgbakwunye nri ellagitannin. Urolithin A Mmeju nwekwara ngwa ngwa. Karịsịa pọmigranet Mmeju e rere ọtụtụ ebe na-eji na-aga nke ọma. Ihe mgbakwunye ndị a na-esite na mkpụrụ osisi ma ọ bụ mkpụrụ wee mepụta ha mmiri ma ọ bụ ntụ ntụ.
N'ihi ọdịiche dị na nri ellagitannins na nri dị iche iche, ndị ahịa nke urolithin zụta ya na-echebara isi iyi nri. Otu ihe a na - emetụta mgbe ị na - agbakwunye urolithin B ntụ ntụ ma ọ bụ mmeju mmiri.
Ihe omumu omumu mmadu nke ejiri urolithin A uzuzu ma obu B emeghi ihe obula banyere nsogbu ndi ozo.
Garcia-Muñoz, Cristina; Vaillant, Fabrice (2014-12-02). "Ọdịdị Metabolic nke Ellagitannins: Mmetụta maka Ahụike, na Nchọpụta Nchọpụta maka Nri Na -arụ Ọrụ Ọhụrụ". Nyocha dị oke egwu na sayensị nri na nri.
Bialonska D, Kasimsetty SG, Khan SI, Ferreira D (11 Nọvemba 2009). "Urolithins, eriri afọ microbial metabolites nke pọmigranet ellagitannins, na-egosipụta ọrụ antioxidant dị ike na nyocha nke sitere na sel". J Agric Food Chem.
Bodwell, Graham; Pottie, Ian; Nandaluru, Penchal (2011). "Nchọgharị elektrọnị na-achọgharị diels-njikọ nke ngụkọta nke okenye nke Urolithin M7".